म शुग्देनका बारेमा अब बोल्न सक्छु | Tsem Rinpoche
बिगत १५ बर्ष भन्दा बढी समय देखी मैले हाम्रो वंश, अभ्यासहरू तथा परम्पराहरूका बारेमा बोल्न चाहिरहेको थिएँ । मेरा गुरूबाट मैले यस विषयमा चुप रहन तथा शान्त रहन सल्लाह पाइरहेको थिएँ । मेरो गुरूको निर्देशनको अवहेलना गर्न म सक्दिन । केही बर्षको अन्तरालमा मैले यस बारे बोल्न सक्छु कि भनेर सोध्दै आएको छु र अन्तत: गत बर्ष मैले स्वीकृती पाएँ । मैले यस विषयमा शान्त रहन निर्देशनलाई मान्दै आइरहेको थिएँ ।
कसैले म लुकिरहेको वा बोल्न डराएको वा बफादार थिइँन भन्ने सोच्लान् तर म को हुँ भनेर बोलेर प्रमाणित गर्नु पर्दैन । मैले केवल गुरू प्रति समर्पण तथा शिक्षकहरू प्रति विश्वास राख्नु पर्दछ । मैले मेरा अभ्यासहरू लुकाइराखेको तथा अभ्यास गर्ने कुरा अस्वीकार गर्ने भनी दोष लगाईराखिएको छ, तर वास्तवमा मैले कहिल्यै मेरा अभ्यासहरू रोकिनँ, तर सार्वजनिक रूपमा तथा हाम्रा केन्द्रहरूमा मैले मेरा गुरूको अनुमति बिना अभ्यासको अनुमति दिइँन । थाहा छ, पहिले तिब्बती समाजमा धेरै ईर्ष्यालु व्यक्तिहरूको अरूलाई क्षति पुर्‍याउने मनसायका कारण हाम्रो रक्षकको अभ्यासका बारे सार्वजनिक गरिँदा हामीलाई भौतिक रूपमा क्षति पुर्‍याइन्थ्यो । मेरा गुरूले मेरो बारेमा के सोच्नुहुन्छ भन्ने भन्दा बाहेक अरूले मेरो बारेमा के सोच्छन् भन्नेबारे मलाई पर्वाह छैन । मेरो गुरू प्रतिको समर्पण नै मेरो जीवनको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । मानिसहरूले मेरो विरूद्धमा मन लागेका कुरा गर्न सक्छन्, तर मलाई केही पर्वाह छैन किनभने, मैले गरिरहेको कुरा मलाई थाहा छ । मलाई मेरो गुरू प्रति विश्वास छ र उहाँले मलाई दिनुभएको पवित्र रक्षक प्रति पनि । मलाई ईन्टरनेटका नकारात्मक कुराहरू, मेरा गुरूको, मेरो अभ्यास वा मेरा रक्षक विरूद्धको गफहरू प्रति विश्वास छैन । उनीहरू जे चहान्छन् भन्न सक्छन्, समयले बताउने छ कि उनीहरू कस्ता मान्छेहरू हुन् भनी । एउटा रूखको पहिचान त्यसका फलहरूबाट हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिले सधैं अरूका विरूद्धमा नकारात्मक कुरा गरिरहन्छ र अझ उसले नचिनेको तथा कहिल्यै नभेटेको व्यक्तिहरूका बारे पनि नकारात्मक कुरा गर्छ भने, त्यसले उसको आफ्नो विचारहरूका बारे बोल्दछ र अन्तत: ती कुरा त्यस व्यक्तिको चरित्रका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् ।
तन्त्रमा आफ्नो यिदाम तथा रक्षक गोप्य राखिन्छ । ती गोप्य अभ्यासहरू हुन् । यिनलाई गोप्य राख्नाले आफ्ना प्राप्तिहरू बढ्दछन् । हाम्रो बाह्य रक्षक (सेत्राप) वा सार्वजनिक रूपमा रक्षक हुन सक्छन् जसका बारेमा हामी भन्न सक्छौं तर हाम्रो गोप्य रक्षक पनि हुन सक्छन् जसका बारे हामी खुलासा गर्दैनौँ, जुन हाम्रा गुरूले उपलब्ध गराएका हुन्छन् । हामीसँग साधारण यिदामहरू हुन सक्छन् जस्तै, मञ्जुश्री, चोंखापा, तारा र यिनका बारेमा हामी बताउन सक्छौं तर व्यक्तिगत गोप्य यिदामका बारे भन्न मिल्दैन । हाम्रा यिदाम तथा रक्षक भनेका साथीहरूसँग वा ईन्टरनेटमा गफ गर्ने विषय होइनन् । हामी विनम्र तथा अनुशासित हुनु पर्दछ । यिनीहरू तन्त्रका तरिका हुन्, मेरा नियमहरू होइनन् । विस्तृत रूपमा बुझ्न तान्त्रिक प्रतिज्ञाहरू, गुह्यसमाजका मूल पाठहरूका साथै जे चोंखापाले लेख्नुभएको “Stages and Paths of Tantra” पुस्तक पढ्नुहोस् । धेरैले यी महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू बुझ्दैनन् तर, धर्म वा तन्त्रको कुरा आउँदा, म अत्यन्तै पारम्परिक छु तथापि, आधुनिक समयका मानिसहरूका विचारहरूलाई जोड्न मेरो बाहिरी आवरण पारम्परिक नलाग्लान्, तर म पारम्परिक छु । उदाहरणको लागी यदि तपाईंको गोप्य यिदाम यमंतका हुन् र कसैले तपाईंलाई के तपाईंको यिदाम यमान्तक हुन् भनी सोधे भने, तपाईंले होइन भन्न सक्नु हुन्छ । तान्त्रिक आचरण अनुसार तपाईंले झुट बोलिरहनु भएको छैन किनभने, तपाईंले उच्च तहको प्राप्तिका लागी आफ्नो अभ्यास गुप्त राख्नु पर्दछ । तपाईंले आफ्नो यिदाम तारा हुन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो यिदाम खुलासा गरे तपाईंले अड्चनहरू निम्त्याउन सक्नुहुन्छ । रक्षकको अभ्यासमा पनि उस्तै हुन्छ । यदि सबै भन्दा कडा मानेमा अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो भित्री समुह भन्दा बाहिर तपाईंले आफ्नो रक्षकका बारे खुलासा गर्नुहुँदैन । यदि कोही अत्यन्तै सफल हुनुहुन्छ र कसैले के उहाँसँग दिव्यदृष्टि छ भनी सोधेको खण्डमा दिव्यदृष्टि भएता पनि छैन भनी भन्नुपर्छ र सामान्य व्यवहार नै गर्नुपर्छ । यो कदम्पा तरिका हो वा दिमागको तालिम गर्ने तरिका हो, जुन गेलुग विद्यालय र सन्तजीवन अन्तर्गत पटक-पटक दोहोर्याएर सिकाइन्छ । गादेन, सेरा र ड्रेपुंगको गुम्बाहरूमा तपाईंले अलौकिक शक्ति प्राप्त गरेपछि खुल्ला रूपमा प्रदर्शन गर्न पाउनुहुन्न । यो कडा रूपमा बन्चित छ । तसर्थ तान्त्रिक मान्यता अनुसार तपाईंले आफ्नो भित्री गोप्य यिदाम र रक्षकका बारे खुलासा गर्नुहुँदैन, जतिसुकै मान्छेहरूले तपाईंलाई चिढ्याउन खोजे पनि । जसले तपाईंको अभ्यासबाट बिमुख गराउन खोज्छन्, तिनीहरूले सर्वोच्च योग तन्त्रको अज्ञानता जनाउँछन् । जसले मानिसहरूका रक्षक तथा यिदाम र अभ्यासहरूका बारे सोधिरहन्छन्, तिनले गहिरो अज्ञानता जनाउँछ । एक अभ्यासकर्ताका लागी तिनीहरूका मागहरू अज्ञानताका फत्फताई हुन् ।
म हाम्रो वंश, अभ्यासहरू तथा रक्षकका बारेमा धेरै भन्दा धेरै कुरा गर्नेछु तर म अरूलाई असर पर्ने गरी वा दुख्ने गरी वा हानी हुने गरी बोल्ने छैन । हाम्रो कर्म अझै समाविष्ट हुन्छ । हामीले गर्ने गाली वा बोली राम्रो उद्देश्यले बोलिएको छ वा छैन, त्यसमा कर्म जोडिएकै हुन्छ । मलाई अझ धेरै नकारात्मक कर्मको आवश्यकता छैन । हामीले सत्य दयालु बोली मार्फत् अविच्छिन्न रूपमा सत्य उजागर गर्न र बाँड्न सक्छौं तर अन्य व्यक्ति वा गुरू वा अभ्यासकर्तालाई गिराउन हुँदैन । यदि म अरू प्रति निर्दयी भएँ भने मेरा गुरू र रक्षक खुशी हुनुहुने छैनन् । समय समयमा मेरो जीवनमा बाधा अप्ठ्याराहरू पैदा गर्न कोशिश गर्नेहरू प्रति पनि म मध्यम मार्ग अपनाएर बोल्न चाहान्छु ।
म पवित्र दलाई लामाका विरूद्धमा बोल्ने छैन किनभने, मैले उहाँबाट दिक्षाका प्रतिज्ञा प्राप्त गरेको छु र साथै धेरै शिक्षा पनि । तर उहाँ मात्र मेरा गुरू हुनुहुन्न । मलाई मेरा गुरूहरूमध्ये कोही एक भनेर छान्न मन पर्दैन तथापि केही व्यक्तिहरू त्यसो गर्छन् । म सधैं पवित्र दलाई लामाले सिकाउनुभएका अभ्यासहरू र मेरा मूल गुरू पवित्र क्याब्जे जोङ रिन्पोछेका अभ्यासहरू जारी राख्नेछु । म कुनै एक छान्दिन । म छान्न सक्दिन । यसरी छान्नु मेरो तान्त्रिक प्रतिज्ञाको विरूद्ध हुनेछ । म मेरा केही गुरूहरूका वाणीहरूसँग सहमत नहुन सक्छु र म त्यस बारे विनम्रता पूर्वक बोल्न सक्छु र बोल्छु पनि, तर म त्यसबारे नम्र तथा उपकारी हुनेछु । म त्यस प्रति सम्मानजनक हुनेछु । म मेरा सबै गुरूहरूलाई साथमा राख्नेछु । पवित्र दलाई लामा प्रख्यात हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र क्याब्जे जोङ रिन्पोछेभन्दा धेरै प्रख्यात हुनुहुन्छ, तर त्यसको तात्पर्य जोङ रिन्पोछे केही कम वा गलत हुनुहुन्छ भन्ने होइन । म मेरा गुरूहरू र उहाँहरूको उपदेशहरू उहाँहरूको प्रसिद्धीका आधारमा चयन गर्दिनँ । म गुरूको चयन कसरी उहाँहरूले मेरो जीवन र मेरो विचारहरूमा प्रभाव पार्नुभएको छ, त्यसका आधारमा गर्दछु र त्यो मेरो गुरू र छनौटसँगको निश्चित कर्मको सम्बन्ध हो । कोही गुरूहरूले तपाईंलाई धेरै दिक्क बनायेर तपाईं टाढा जान सक्नु हुन्छ, तर त्यसको अर्थ तपाईंको उहाँहरूसँग जोडदार सम्बन्ध हुनसक्छ र तपाईंले उहाँहरूसित राम्रोसँग सम्बन्ध जोड्न केवल आफ्नो कर्मलाई शुद्ध गर्नपर्ने हुनसक्छ । गुरूसँगको बलियो कर्मको आत्मीयता असीम विश्वासका रूपमा आउन सक्छ वा सुरूमा असहमतिका रूपमा आउन सक्छ । कर्म विचित्रको हुन्छ ।
जब मैले क्याब्जे रिन्पोछेलाई १८ बर्षको उमेरमा लस एन्जलसमा भेटेँ, उहाँले मेरो भित्री हृदयसम्म प्रभाव पार्नुभयो र मेरो अस्तित्वलाई भित्रसम्म महसुस गराउनुभयो। मलाई उहाँसँग बिताएका हरेक क्षण प्रिय लाग्छन् । उहाँ सदाका लागि मेरा मूल गुरू हुनुहुन्छ र उहाँबाट प्राप्त कुनै पनि अभ्यासहरू तथा रक्षक मैले त्याग्ने छैन । यसलाई हाम्रो गुरू प्रतिको समर्पण भनिन्छ । म कुनै महान व्यक्ति होइन न म भित्र कुनै भव्य विशेषता छ, तर मेरो गुरू प्रतिको समर्पण मलाई मेरो मनपर्ने गुण हो । यदि जोङ रिन्पोछे द्वारा प्रदान गरिएको रक्षकको अभ्यास गर्नाले मानिसहरूले मलाई दुर्व्यवहार गर्छन् वा अपमानित गर्छन् वा त्याग गर्छन् वा छाडेर जान्छन् भने, त्यो ठीक छ । म क्याब्जे जोङ रिन्पोछेले प्रदान गर्नुभएको अभ्यासका निम्ति दुर्व्यवहार सहन सक्छु । संसारले दिन सक्ने जेसुकै भन्दा पनि धेरै प्रबुद्धता अधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मेरा गुरूले मलाई प्रयुक्त गर्नुभएको कुरा त्याग गरेका कारण मलाई प्रशंसा गरिनु भन्दा जोङ रिन्पोछेले प्रदान गर्नुभएको अभ्यासका कारण म अपमानित हुनु नै बेश । मलाई पनि अरूलाई जस्तै प्रशंसा गरिएको मनपर्छ, तर मेरो अध्यात्मिकताको मूल्य चुकाएर होइन । म मेरो आत्मा बेच्दिन । तसर्थ कृपया मेरो गुरू प्रतिको समर्पण, मेरो गुरूको अनुशरण र मेरा गुरू प्रति भक्तिका लागी मेरो निन्दा नगर्नुहोस् वा मलाई घृणा नगर्नुहोस् । यदि यसले तपाईंलाई अपमानित गराउँछ भने, म माफी चाहान्छु । म तपाईंको भलो चाहान्छु । तपाईंले आफ्नो रक्षकको अभ्यास गर्नु रक्षकको लागीभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने तपाईंको गुरूले त्यसलाई दिनुभएको हो । तपाईंले आफ्नो अभ्यास रक्षक प्रतिको विश्वासले भन्दा पनि आफ्नो गुरू प्रतिको विश्वासका कारण जारी राख्नुहुन्छ । यो कुरा तपाईंको दिमागमा बलियोसँग राख्नुहोस् । तपाईंको रक्षक प्रबुद्ध हुनुहोला वा नहुनुहोला, एक पटक तपाईंको बज्रधारा समान गुरूले निर्धारित गर्नुभएपछि केही फरक पर्दैन । तपाईंले आफ्नो गुरू प्रतिको वाचा राख्नुहोस् । त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
पवित्र क्याब्जे जोङ रिन्पोछे, सुत्र तथा तन्त्रका सर्वोच्च गुरू
मैले पवित्र दलाई लामा र पवित्र क्याब्जे जोङ रिन्पोछेमा बीच कुनै एक किन छान्न पर्यो ? धेरै बर्ष सम्म मैले यी दुई लामाहरू मध्ये कुनै एक कहिल्यै छान्न परेन, तर अहिले आएर किन मलाई यो परिस्थितिमा ल्याइँदैछ ? तपाईंसँग कुनै एक चयन गर्ने विकल्प होला किनभने, तपाईंले कुनै पनि एक लामाबाट शिक्षा ग्रहण गर्नु भएको छैन, तर मेरो अवस्था त्यस्तो होइन, कृपया बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् । यो मेरो दिमागका लागी पनि अत्यन्तै अशान्तिपूर्ण हुन्छ तसर्थ मैले यस्ता वाणीगत विवादहरूको उत्तर धर्म भित्र खोज्नु पर्छ । अश्वघोषद्वारा लिखित गुरूपञ्चासिकाका अनुसार हामीले सम्पूर्ण गुरूहरूलाई सम्मान गर्नुपर्दछ जसबाट हामीले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ । हामीले कुनै पनि गुरूको निन्दा गर्नु हुँदैन, नत्र हाम्रो आध्यात्मिक अभ्यासहरू पूर्ण हुन सक्दैनन् । यसलाई हेर्दा कडा र कठिन लाग्न सक्छ, तर आफ्नो सहज क्षेत्रमा रहनु आध्यात्मिक प्रगतिका लागी सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । यदि उनीहरूले विवाद वा मतभेदहरू देखाउँछन् भने, म त्यसलाई मेरो दिमागलाई वशमा राख्ने एक अलौकिक खेलका रूपमा लिन्छु । तन्त्रमा सम्पूर्ण आवाज, मुद्राहरू, धारणाहरू, विचारहरू यिदामका हुन् । त्यस तरिकाले हामीले यसमा पारंगत हुन हाम्रो वास्तविकता दैनिक रूपमा परिवर्तन गर्दछौँ। हामीले हाम्रा लामाहरूलाई गलत रूपमा लिन सक्दैनौँ र हाम्रा तान्त्रिक अभ्यासमा हामीले पूर्ण रूपमा एकै दिनमा उहाँलाई बुद्धका रूपमा देख्दछौँ । कसैले त्यसो गर्न सक्छन् तर त्यो रोकावट हुनेछ । त्यसले विवाद पैदा गर्नेछ । तान्त्रिक ध्यानको उद्देश्य भनेको हाम्रा सांसारिक विचारहरूमा नअल्झिनु हो । किनभने, यदि मैले यसलाई विवादका रूपमा हेरें भने, मैले सारा लामाहरूको त्याग गर्नेछु । एक जना उच्च प्राप्ति भएका लामा कसरी अर्को भन्दा महान हुन सक्छन् । दर्जा भनेको मान्छेले बनाएको हो र केवल लैकिक उद्देश्यका निम्ति, तर आध्यात्मिक परिवेशमा यो सापेक्ष हुँदैन । मेरो लामा दुई शिष्य भएका एक साधारण ऋषि हुन सक्नुहुन्छ । उहाँ प्रख्यात हुनु भएपनि वा नहुनु भएपनि मेरा लागि बुद्ध नै हुनुहुन्छ । कुनै एक लामा अन्यन्तै प्रख्यात तथा प्रसिद्ध हुँदैमा उहाँको उपदेशहरूले अन्य साधारण तथा विनयशील ऋषि गुरूका उपदेशलाई च्यूत गर्न सक्दैन । मैले मेरा लामाको अनुशरण गर्नुको कारण उहाँका शिक्षाहरू मेरा लागी लाभकारी हुनाले हो, उहाँको ख्यातीका कारण होइन । ख्याती तथा हजारौं शिष्यहरू हुनु सँग कसको उपदेशहरू पालना गर्ने भन्ने कुराको कुनै सरोकार हुँदैन ।
मैले क्याब्जे जोङ रिन्पोछेको शिक्षा तथा उहाँद्वारा मलाई प्रदान गरिएका रक्षकको अनुसरण गरें भन्दैमा के म दलाई लामाको विरूद्ध हुन्छु ? मलाई त्यसो लाग्दैन । पक्कै पनि लाग्दैन । यदि मैले टाओ, सैतान, हिन्दू, जेन, क्रिष्टियन, वा पैगन धर्म मान्दैमा र दलाई लामाको आध्यात्मिक परम्परा भन्दा फरक छु भन्दैमा के म दलाई लामाको विरूद्ध हुन्छु ? पक्कै पनि हुन्न । यदि म दलाई लामाको विरूद्धमा छैन भने, किन मलाई यस तरिकाले वर्गिकरण गरिन्छ ? किन सबथोकलाई कालो र सेतो भनी संक्षेपिकरण गरिन्छ ? कहिलेकाहिँ हाम्रा आमा र बुवाको मतभेद हुन्छन्, हामी आमाको कुनै कुरासँग सहमत हुन्छौं र केही कुरामा बुवासँग पनि सहमत हुन्छौं । कुनै बेला हामी बुवाको कुरासँग सहमत हुनु पर्छ भने, कहिलेकाहिँ आमाको कुरासँग सहमत हुनु पर्छ, तर हामी कुनै एक अभिभावकसँग सहमत भयौँ भन्दैमा हाम्रा अर्का अभिभावकको विरूद्ध छौँ भन्ने हुँदैन । हाम्रा लामाहरूको सन्दर्भमा पनि किन कालो-सेतो हुनुपर्ने र तिब्र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने ? त्यसो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म त्यो तरिका चयन गर्दिन ।
कुनै मान्छे भन्छन् कि, आफ्ना रक्षकको त्याग गर्नाले वा जबरजस्ती अरूलाई रक्षकको त्याग गर्न लगाएर उनीहरू दलाई लामाका असल शिष्य हुन्छन् । तर मलाई लाग्दैन कि, तपाईंले एउटा सल्लाह अनुशरण गरी बाँकि बिर्सनु भयो भने, तपाईंले राम्ररी अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंले एक लामाको सट्टा अर्को लामाको चयन गर्नु पर्ने वा साथीहरूको त्याग गर्नु पर्नेले केही स्वाभाविक रूपमा गलत भइरहेको जनाउँछ । उदाहरणको लागि, पवित्र दलाई लामाले सिकाउनु भएको छ कि,:
चीन तिब्बतको ठूलो शत्रु मानिन्छ । यो उनीहरूको दृष्टिकोण हो । म केवल यसलाई उदाहरणको रूपमा प्रयोग गर्दैछु । तत्कालीन कम्युनिष्टहरूले हजारौं गुम्बाहरू ध्वस्त बनाईदिए, धेरै संघको हत्या गरे, हजारौं मूर्तिहरू, पवित्र ग्रन्थहरू जलाइदिए र बुद्ध धर्म प्रतिबन्धित गरिदिए । ती ठूलो नोक्सानी जस्तो लाग्छ र असंख्य नकारात्मक कर्म संचित गरेको देखिन्छ । उनीहरू दलाई लामाका विरोधी लाग्दछन् । तर दलाई लामाले कम्युनिष्टहरूलाई माफ गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसो भए, किन अत्यन्तै थोरै “हानी” गरेका तथा अत्यन्तै थोरै कथित “नोक्सानी” गरेका शुग्देन व्यक्तिहरूलाई माफ नगर्ने ? यदि दलाई लामाले आफ्नो सार्वजनिक वक्तव्यहरूमा कम्युनिष्टहरूलाई माफी दिन सक्नुहुन्छ भने, उनका अनुयायीहरूले शुग्देन व्यक्तिहरूलाई अपमान नगर्न र माफ दिन सक्दैनन् ? दलाई लामाले वर्तमान चिनियाँ नेताहरूलाई तिब्बतको समस्या समाधान गर्न भेट्न चाहेका छन् । यस समस्यालाई हल गर्न शुग्देनका अनुयायीहरूलाई किन नभेट्ने ? किन एक शत्रुलाई माफ गरी अर्कालाई बेवास्ता गर्नु ? केवल काल्पनिक परिस्थितिको प्रश्न । तसर्थ दलाई लामाले सिकाउनु भए जस्तै दयालु बन्न माफ दिनु सबैजनालाई उपयुक्त हुन्छ ।
दलाई लामाले झुठो नबोल्न तथा ईमान्दार बन्न भन्नु भएको छ । के उहाँको अनुशरण गर्ने सबैजना ईमान्दार छन् ? के तपाईंले आफ्ना सपथ कायम राख्नु भएको छ ? के तपाईं कहिल्यै झुट बोल्नु हुन्न ?
सपथ लिँदा, वचनका चार नकारात्मकता, दिमागका तीन र शरीरिक तीन नकरात्मकताहरु निषेधित गरिएका हुन्छन् । के हामीले ग्रहण गरेका सपथहरू राम्ररी पालन गरेका छौँ ? यदि छैनौँ भने, अरूलाई हेरेर आलोचना नगर्नुहोस्, आफै भित्र नियाल्नुहोस् । दलाई लामा वा अन्य जुनसुकै लामाका शिष्य भए पश्चात् के तपाईंले आफ्ना सपथको अनुशरण गर्नु पर्दैन ? जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अवश्य गर्नु पर्छ ।
जब हामी अरूलाई हानी गर्छौं, उदाहरणका लागी, शुग्देनका अनुयायीहरूलाई र ईन्टरनेटमा उनीहरूलाई दैनिक रूपमा आलोचना गर्छौं, के हामीले दलाई लामाले प्रदान गरेका वा सिकाएका सपथहरूको अनुशरण गरिरहेका छौँ ? यदि हामी दलाई लामाका राम्रा अनुयायी बन्न चाहन्छौँ र हामी हुनु पनि पर्छ, तथा उहाँको राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छौँ भने, हामीले हाम्रा सपथहरूको अनुशरण गर्नु पर्छ र धर्मको गहन अभ्यास गर्नुपर्छ तथा अरूलाई पीडा दिन वा दोषारोपण गर्नु हुँदैन । यदि आफू सहमत नभएका अभ्यासहरू अरूले अवलम्वन गर्न चाहन्छन् भने, त्यो उनीहरूको अधिकार हो । यदि त्यो उनीहरूको अधिकार हो भने, किन उनीहरूलाई दैनिक रूपमा ईन्टरनेटमा तथा व्यक्तिगत रूपमा आलोचना गर्ने ? तपाईंलाई मन नपरेको कुरा अभ्यास गर्छन् भनी किन उनीहरूलाई निश्चित सार्वजनिक स्थानहरूमा निषेध गर्ने ? शुग्देनको अभ्यास गर्नु उनीहरूको अधिकार हो भन्ने तर अर्को तर्फ सधैं शुग्देनको विरूद्ध सल्लाह दिनाले धेरैको सम्वेदनामा चोट पुर्‍याउँछ र त्यो ढोंगी देखिन्छ । उदाहरणका लागी मानौँ, एसियाली मानिसहरू अरू जाती समान छन् (जुन् उनीहरू छन् पनि), तर उनीहरूलाई कुनै निश्चित विद्यालय, नगर र सार्वजनिक स्थानहरूमा निषेधित छन्, ती ढोंगी लाग्दछन्, होइन र? तपाईंले उनीहरू समान छन् भन्नुहुन्छ तर, तपाईंका कार्यले त्यस्तो दर्शाउँदैन । किन तपाईंले शुग्देनका बिरूद्ध सल्लाह दिन्छु भनेर निरन्तर भन्नुहुन्छ तर त्यो केवल तपाईंको सुझाव हो र तपाईंको सुझावले लाखौंलाई असर गरिरहेको हुन्छ ? अमेरिकाले चीन माथी मानव अधिकारका मुद्दामा दोषारोपण गर्छ, तर हेर्नुहोस् हालसालै फर्गसनमा के भएको थियो । कुनै मान्छेहरूले दलाई लामाका विरूद्धमा बोल्न सक्छन् र त्यसपश्चात् तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले उनीहरूका विरूद्धमा गलत तरिकाले कार्य गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुभयो । तर सावधानीपूर्वक सोच्नुहोस् कि तपाईंको बोली र शब्दको प्रयोगले तपाईं आँफै, दलाई लामा र बुद्धधर्म माथी सम्भवत: सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर परेको होला । दलाई लामाको प्रतिनिधित्व राम्रोसँग गर्नुहोस्, अरूले नगरे पनि । अरूको व्यवहारका कारण आफ्नो व्यवहारमा असर पर्न नदिनुहोस् किनभने, कर्म व्यक्तिगत हुन्छ र यस अवस्थामा हामीले व्यक्तिगत रूपमा भोग्नु पर्छ ।
पवित्र क्याब्जे त्रिजंग रिन्पोछे, सम्पूर्ण तान्त्रिक मण्डलहरूका परम प्रभु जो अरू होइन, हेरूका हुन् ।
विगत ४०० बर्षमा रक्षकको अभ्यासको सुरूवात देखि कसैले पनि कुनै एक वा अर्का लामा छान्न पर्दैनथ्यो, किन अब आएर (सन् १९९६ देखी), हामीले कुनै एक लामा चुन्नु पर्यो ? र यदि हामीले कुनै एक लामाको चयन गर्यों भने, अर्का लामाको विरूद्धमा हुन्छौं ? त्यो तपाईंको दृष्टिकोण हुन सक्छ, त्यो तपाईंको सोच्ने तरिका हुन सक्छ, त्यो तपाईंले दुनियाँलाई हेर्ने नजर हुन सक्छ, तर मैले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यो होइन । मेरो संसार फरक छ, मेरो संसार मधयम मार्ग हो, मैले मेरा लामाहरू र अभ्यासहरूबाट राम्रा कुराहरू लिन सक्छु, र जुन कुरा सँग म असहमत छु, त्यसको बारे मैले टिप्पणी गर्नु पर्दैन र उनीहरूका विरूद्ध नकारात्मक अनादरपूर्ण अलोचना गर्नु पर्दैन, अथवा मैले छान्न पर्दैन । फेरी पनि, यो मेरो संसार हो र म त्यसरी नै मेरो संसारमा जिउन चहान्छु । तपाईंले आफ्नो चयन गर्न सक्नुहुन्छ । मेरो संसारले मलाई मनको शान्ति दिन्छ, तपाईंको संसारले तपाईंलाई पूर्ण गर्छ र एक वा अर्का लामा प्रति विश्वासघाती बनाउँछ भने, म त्यस्तो अवस्थामा बस्न मञ्जुर छैन र म कहिल्यै पनि त्यस अवस्थामा बस्ने छैन । म मेरा सबै लामा र अन्य गुरूहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले सिकाउनुभए बमोजिम अभ्यास गर्न चाहन्छु किनभने, अन्त्यमा अभ्यासले नै मलाई प्रबुद्धता तर्फ डोर्याउँछ । म चयन गर्दिन, बरू मेरा मूल गुरूले मलाई दिनुभएको अभ्यासका बारे बोल्छु, जसले मलाई धेरै फाईदा दिएको छ र चार सय बर्ष सम्म धेरैलाई लाभ पुर्याएको छ । म अन्य धेरैसँग यो बाँड्ने छु, जो कर्मका दृष्टिकोणले तयार छन् ।
म केही पनि होइन, तर मलाई भएको सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको पवित्र क्याब्जे जोङ रिन्पोछेसँग भेट हुनु हो । म उहाँ प्रति मेरो प्रेम, आदर तथा विश्वास मेरो अन्तिम दिन सम्म रहनेछ । म मेरो अभ्यास वा क्याब्जे जोङ रिन्पोछेद्वारा निर्धारण गरिएका मेरा रक्षकको त्याग जतिसुकै दवाव आएता पनि गर्ने छैन । यदि ती रक्षक मेरा गुरूका लागी राम्रा भए मेरा लागी पनि पक्कै राम्रा हुन्छन् । म मेरो आस्था, मेरो गुरू प्रतिको समर्पण र अभ्यासहरू त्याग गर्न भन्दा मर्नु ठीक ठान्छु । म कहिल्यै विमुख हुने छैन । मैले यसका लागि पवित्र दलाई लामाप्रति अभद्रता व्यक्त गर्न खोजेको होइन; मेरा रक्षकको अभ्यास राजनैतिक कारणले गरेको होइन । मैले कहिल्यै गरेको छैन । दलाई लामा मेरो अभ्याससँग सहमत नहुन सक्नुहुन्छ, तर म हात जोडेर सम्मानपूर्वक झुकेर माफी माग्दछु साथै मेरो अभ्यास जारी राख्दछु । मेरो अभ्यासका लागि मलाई पैसा तिरिएको छैन र मलाई केही मुनाफा पनि आउँदैन। अझ केचराबाट भएका कुनै पनि धर्म स्टोर र अनलाईन स्टोरहरूबाट मैले एक डलर पनि पाउँदिन । सबै नाफा हाम्रा कर्मचारीहरू, तिनका भत्ता र हाम्रो सुन्दर केचराको सम्भारमा जान्छन् । म कहिल्यै पनि धर्मबाट नाफा कमाउँदिन ।
पवित्र क्याब्जे फबोंखा रिन्पोछे, सर्वश्रेष्ठ कप्तान जसले कालचक्रको कपटी सागरबाट हाम्रो नाउ पार लगाउँछन् ।
म मेरा गुरू, यिदाम, धर्म तथा रक्षक प्रति सदा अडिग रहनेछु । मैले सिकेका कुराहरू संसारसँग बाँड्नेछु । दु:खी संसारमा जीवन केही मात्रामा सुन्दर छ किनभने, मैले पवित्र क्याब्जे जोङ रिन्पोछेलाई भेट्न पाएँ, जसले पवित्र क्याब्जे त्रिजंग रिन्पोछेका अभ्यासहरू तथा कुल परम्परा हस्तान्तरण गर्नुभयो । त्रिजंग रिन्पोछे क्याब्जे जोङ रिन्पोछेका मूल गुरू हुनुहुन्थ्यो । कति भाग्यमानी म ? लामो समय सम्म संसारमा एक बेकम्मा भएर भौंतारिरहेको म जस्तोले जिवित हेरूका बुद्धलाई भेट्ने अवसर पाएँ र उहाँको नाम थियो, पवित्र क्याब्जे जोङ रिन्पोछे!! कस्तो भाग्यमानी म? धेरै भाग्यमानी! अति भाग्यमानी तथा अति सौभाग्यशाली । म क्याब्जे जोङ रिन्पोछेलाई माया गर्छु, जो मेरा आध्यात्मिक पिता हुनुहुन्छ र म पवित्र क्याब्जे त्रिजंग रिन्पोछेलाई माया गर्छु, जो मेरा आध्यात्मिक हजुरबुवा हुनुहुन्छ । तीन जना जिवित बुद्धहरूको सम्पर्कमा हुन पाउने म कति भाग्यमानी । म जोङ रिन्पोछे, त्रिजंग रिन्पोछे तथा फबोङ्खा रिन्पोछेलाई प्रेम गर्छु । र मेरो आस्था र समर्पणका लागी सबैले मलाई दोषारोपण गर्लान्, दुर्व्यवहार गर्लान् तथा मेरो स्तर गिराउलान् तर म हार मान्ने छैन । मेरो साथमा कोहि पनि नहुँदा समेत उहाँहरूले प्रयुक्त गर्नुभएको एक पनि अभ्यास छोड्ने छैन । म ईमानदार छु । आध्यात्मिक रूपमा ईमान्दार ।
म कहिल्यै पनि मेरा गुरू र अभ्यासहरू परित्याग गर्ने छैन । म मेरो लोजोङ र लाम रिमको अभ्यासका लागी कार्यरत रहनेछु र धर्मको प्रबर्द्धन गर्नेछु । मेरो मुख्य अभ्यास कुनै रक्षकहरू होइनन् तर धर्म हो, विशेषत लोजोङ । म निरन्तर प्रयास गर्नेछु र राम्रो व्यक्ति बन्न कडा मिहिनेत गर्नेछु तथा मेरा अध्यात्मिक अभ्यासमा संलग्न रहनेछु । यस पृथ्वीमा मेरो समय छोटो छ र म संसारका कुनै चीजमा मेरो समय खेर फाल्न चाहन्न किनभने, त्यसको कुनै अर्थ छैन ।
जीवनमा गर्न बाँकि केही पनि छैन । मैले जस्तो जानेको छु, त्यस तरिकाले म राम्रो व्यक्ति बन्नेछु र यदि कसैलाई त्योसँग समस्या भए म उहाँहरूसित माफी माग्छु जसरी म उहाँहरूलाई माफ गर्छु ।
दलाई लामा युरोपमा “एकदमै धेरै” शरणार्थीहरू छन् भन्नुहुन्छ »
12 Responses to म शुग्देनका बारेमा अब बोल्न सक्छु
Joy Kam on Dec 10, 2018 at 6:10 am
Tsem Rinpoche on Nov 23, 2018 at 6:16 am
Pastor Adeline Woon on Sep 21, 2018 at 1:44 am
Beatrix Ooi on Aug 10, 2018 at 6:38 am
Pastor Shin Tan on Aug 1, 2018 at 11:29 pm
Pastor Adeline Woon on Jul 29, 2018 at 6:08 pm
Pastor Adeline Woon on Jul 27, 2018 at 9:03 am
Pastor Adeline Woon on Jul 25, 2018 at 6:22 am
Joy Kam on Jul 22, 2018 at 7:56 pm
More articles from Current Affairs & News / Dorje Shugden / नेपाली